Ciidanka AMISOM oo Guddoomiye u diiday inuu galo Garoonka Diyaaradaha… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka AMISOM ayaa Maanta is hor istaag ku sameeyay Guddoomiyaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, xili uu doonayay inuu galo Garoonka diyaaradaha Magaaladaas ee Ugaas Khilaaf.
Guddoomiye Cismaan Dhicisow Dhuubow ayaa tegay Garoonka, isla markaana doonayay inuu gudaha u galo, si uu u soo dhaweeyo Xildhibaano kasoo degayay halkaas, hayeeshee Ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ay u diideen inuu galo.
Guddoomiyaha Magaalada Baladweyne Cismaan Dhicisow ku amray inuu dib uga laabto Garoonka Ugaas Khilaaf, isagoo markii dambena isaga tegay, sida ay sheegayaan wararka.
Guddoomiye Dhicisow ayaa la filayaa inuu faah faahin ka bixiyo sababaha keenay in Ciidanka AMSIOM ay u diidaan xiligaan inuu galo Garoonka, xili uu soo dhaweyn rabay wafdi Xildhibaano iyo xubno kale.
Dhowr jeer oo hore Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ayaa Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan ee dowlad Goboleedka Hirshabeelle u diiday inay galaan Garoonka diyaaradaha Ugaas Khilaaf.